Famelabelarana amin'ny teny Malagasy
Famelabelarana amin’ny teny Malagasy
Ahoana no fomba ahitana mpanjifa?
Indro famelabelarana mikasika ny hoe ahoana no fomba ahitana mpanjifa sy ny fomba fandrosoana ny tolotrao. Mpanolotra: CORBAN
"Inona no atao hoe orinasa?"
Fampianarana FANDRAHARAHANA amin'ny fomba malagasy. Tsotra, fohy nefa mazava tsara. Ato anatin'ito vidéo fohy ito dia azavaina aminao ny atao hoe "orinasa". Matetika tokoa mantsy dia "Birao" na "trano iasana" no fandraisan'ny olona ny atao hoe orinasa. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
"Inona no atao hoe startup?"
Ito horonantsary fohy ito dia manazava amin'ny fomba tsotra ny atao hoe startup. Ny Antony nanaovana azy ity dia misy ny fahadisoankevitra matetika amin'ny fampiasana io teny hoe startup io. Rehefa miteny ny olona dia lazaina fa startup daholo izay orinasa vaovao rehetra vao niforona. Tsy izay nefa no izy ary tena diso izany. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
"Famaritana ny atao hoe mpandraharaha."
Ato anatin'ito oronantsary fohy ito dia azavaina aminao ny atao hoe "mpandraharaha". Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
"Dingana fananganana orinasa."
Ito horonantsary fohy ito dia manazava ireo dingana atao rehefa hanangana orinasa. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
"Ny toetra 10 mampiavaka ny mpandraharaha mahomby."
Inona avy ireo toetra 10 mampiavaka ny mpandraharaha mahomby? Ho hitanao ato izy ireo. Misy ny efa fantatrao fa misy ihany koa ny mety ho vaovao aminao. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
Ireo fandaharana tsara arahina ary mety hanampy amin'ny fandraharahana ao amin'ny YOUTUBE
Indro fizarana atolotr'i CORBAN mikasika ireo fandaharana tsara arahina ary mety hanampy amin'ny fandraharahana ao amin'ny YOUTUBE
4P ireo fitaovana enti-miatrika ny tsena
Ho hazavaina amintsika ao anatin'ity famelabelarana ity ireo fitaovana enti-miatrika ny tsena ara-barotra. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
Lalàna 7 ho an'ny mpanjifa
Tsara ho fantatra tokoa ny lalàna 7 ho an'ny mpanjifa. Manasa antsika hanaraka ny famelabelarana. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
Hai-varotra: ny fomba fiasa rehefa te haka tsena
Ho hazavaina amintsika ao anatin'ity famelabelarana ity ny fomba fiasa rehefa te haka tsena. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise
Inona avy tokoa no tsara ho fantatra mikasika ny hai-varotra na ny marketing? Araho ary ny famelabelarana. Partenaires: SOALOO, Esprit d'Entreprise